Gbasara anyị - Lockey Safety Products Co., Ltd.
Lockey Nchekwa Ngwaahịa Co., Ltd.
Lockout bụ nhọrọ ị na - eme, nchekwa bụ ebe Lockey ga - enweta.
Lockout bụ Lockey niile Kemgbe ndụ ọrụ, we do lockout only and professionally.
Anyị nwere ngalaba R&D anyị iji mepụta atụmatụ niile ahaziri.
A na-akwado ihe ngwọta nchekwa ma ọ bụrụ na ị maghị etu esi eme usoro mkpọchi.
Mmepụta nchekwa bụ ntọala maka inweta arụmọrụ akụ na ụba na mmepe na-adigide. Imirikiti ihe ọghọm nke ebe ọrụ na-akpata site na ume a na-atụghị anya ya ma ọ bụ ịmalite ịmalite ịhapụ ike na-enweghị njikwa mgbe ị na-arụpụta, ntinye ma ọ bụ ndozi.
Lockey na-agbaso na nkà ihe ọmụma mgbe niile na a ga-ekpochi ike ọ bụla dị ize ndụ. Iji chekwaa ndụ ndị ọrụ ọ bụla n'ụwa niile na mma ndị China bụ nchụso adịghị mma nke Lockey.
E guzobere Lockey Safety Products Co., Ltd iji mee ka nchekwa nchekwa ọrụ. Anyị nwere ndị ọrụ nchịkwa nke mbụ na usoro nke ikike ikike ọgụgụ isi nweere onwe ha, yana ISO9001, OHSAS18001, ATEX ， CE na SGS kwadoro nke ọma, na-enye nchekwa nchekwa na igwe, nri, ihe owuwu, ngwa ngwa, kemịkalụ, ume na ụlọ ọrụ ndị ọzọ niile. Ngwaahịa ahụ na-ekpuchi mkpọchi mkpọchi gụnyere mkpọchi nchekwa, mkpọchi mkpuchi, mkpọchi mkpọchi, akara mkpọchi mkpọchi, mkpọchi mkpọchi mkpọchi, ọdụ mkpọchi mkpọchi na ihe ndị ọzọ, yana oke ahịa mbak na nyocha na mba na ụlọ.
Lockey bụ ụlọ ọrụ nke oge a na - ejikọ R & D, ọrụ nrụpụta na mbupụ, ịnwe ndị otu njikwa otu klaasị na ikike ikike ọgụgụ isi nke onwe ha. Anyị rutere ụkwụ n'ichepụta ihe igwe, nri, ihe owuwu, lọjistik, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ume na ndị ọzọ iji nye ụlọ ọrụ nchekwa nchekwa. Ngwaahịa Lockey na-ekpuchi mkpọchi nchekwa gụnyere mkpọchi nchekwa, mkpọchi mkpọchi, mkpọchi mkpọchi, mkpọchi ọkụ eletrik, mkpọchi mkpọchi, igbe mkpọchi otu, mkpọchi mkpọchi na ọdụ, wdg.
Nrụpụta anyị na-agbaso ụkpụrụ dịka ISO9001, OSHA, OHSAS18001, ATEX, wdg.